नेपाल २–१ ले विजयी – नेपालले रच्यो इतिहास, २३ वर्षपछि उपाधि | Nepal's Best Travel Guide
February 15, 2016 Tourism News
नेपाल २–१ ले विजयी – नेपालले रच्यो इतिहास, २३ वर्षपछि उपाधि
Nepali Football Fans – Vioce from them
This is the first time ever my heart has determined to cover my chest with the nepali football jersey. Thanks for nepali football squad, especially the rising star NAVAYUG SHRESTHA, to give 30 million nepali people the greatest of cure caused by the blockade of india despite ongoing adverse situation in nepali football fraternity after the arrest of some nepali footballers in suspicion of match fixing. This is the evidence that nepali football is like nepali sovereignty which never bow down. HATS OFF.
Nepali team ra Nepal lai hardik badhai
Ram Sundar Kusi
nepal Nepali nepalipan nepalitwa nepalikundo
Yes We are the Champion… Nepal beat India 2-1 ‪#‎Nawayug‬ Shrestha….you are the real hero of the day and series
Golden Day for Nepali Football
काठमाडौं, ३ फागुन । साग फुटबल अन्तर्गत आजको भएको रोमाञ्चक खेलामा नेपालले भारतविरुद्ध २ गोलसहित विजयी हासिल गरेको छ ।
भारतको गुहाटीमा भएको खेलमा नेपालले भारतविरुद्ध दुई गोलको सानदार जित दर्ता गराएको हो । खेलको सुरुवातमा भारतले नेपालविरुद्ध एक गोल प्रहार गरेको थियो ।
तर दोस्रो हाफमा नेपालले दश मिनटको फरकमा दुई गोल गरेपछि जित सहज भएको हो । नेपालको दोस्रो गोल भएपछि भारतीय खेलाडी नेपाली खेलाडीविरुद्ध मैदानमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले नेपाली खेलाडीमाथि जथाभावी प्रहार गरेका थिए
१२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा भारतलाई पराजित गर्दै नेपालले २३ वर्षपछि उपाधि जितेको छ ।
शनिबार भारतको गुवाहाटीस्थित इन्दिरा गान्धी एथ्लेटिक रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा नेपालले भारतलाई २-१ गालले पराजित गर्दै २३ वर्षपछि साग फुटबलको उपाधि जितेको हो । उपाधि जितेसँगै नेपालले थप एक स्वर्ण पदक समेत हात पारेको छ ।
नेपालको जितमा प्रकाश बुढाथोकीले ६६ औँ तथा नवयुग श्रेष्ठले ७० औँ मिनेटमा गोल गरे ।
यसअघि पहिलो हाफमा नेपालविरुद्ध हरिचरण नर्जरीले ३५ औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
यसअघि नेपालले सन् १९८४ मा घरेलु मैदानमा भएको पहिलो सागमा र १९९३ मा बङ्गलादेशमा भएको प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जितेको थियो । त्यतिबेला नेपालले क्रमशः बङ्गलादेश र भारतलाई अन्तिममा हराएको थियो । नेपाल आज भारतलाई हराउँदै स्वर्ण जितेर इतिहास रच्न सफल भएको हो ।
सन् १९८७ मा भारतले नेपाललाई हराएर उपाधि जितेको थियो भने १९९९ मा घरेलु मैदानमा भएको आठौँ साफमा नेपालले बङ्गलादेशलाई ०–१ ले नतिजा सुम्पिएको थियो ।
यसअघि आजै भएको महिलातर्फको उपाधि भिडन्तमा भारतले नेपाललाई ४–० ले पराजित गरेको थियो । जितसँगै उक्त हारको बदला पनि नेपालले लिएको छ ।